Tattoos of coyote, ny fahavalon'ny mpandeha an-dàlana ary biby tena manokana | Ny fanaovana tatoazy
Tattoos of coyote, ny fahavalon'ny roadrunner ary biby tena manokana
Nat Cerezo | | Tattoosin'ny toetra amam-panahy
Azo antoka raha miresaka aminao momba ny tombokavatsa coyote ny zavatra voalohany tonga ao an-tsainao dia ilay mpanenjika ny mpandeha an-tany maharitra mandrakizay amin'ny sary Warner.
Na izany aza, el coyote tsy faharesena mandrakizay mahantra manohitra vorona manga. Fantaro ny lafiny roa amin'ity lahatsoratra ity!
1 Ny Coyote, biby noana tsy manan-kitafy sy afa-baraka
2 Ny coyote, marika amerikanina zanatany
Ny Coyote, biby noana tsy manan-kitafy sy afa-baraka
Azo antoka fa efa nahita ny tantara an-tsary Warner izay i Coyote no mahery fo. Ny fototr'ireo dia tena tsotra (ary angamba noho izany antony izany dia mandaitra): ny Coyote dia manandrana mihinana ny mpandeha an-dàlana foana nefa tsy mahomby, ary iharan'ny tsy fahaizany manokana (na ny famoronana manaitra ny saina sy sarotra amin'ny marika Acme). Izany hoe raha tsy nanenjika ny mpandeha lalana hihinana azy ny Coyote dia tsy nisy nanjo ilay zavaboary mahantra.
Ny iray amin'ireo zavatra mahaliana momba ny Coyote dia izany Na dia raisina ho fomba ratsy aza ilay olon-dratsy amin'ny tantara, dia miteraka fahatsapana halemem-panahy sy famindram-po amin'ny mpijery izany. Angamba satria tsy dia lavitra ny fiainana izany: manenjika zavatra fatratra mandra-pahatongantsika hianjera amin'ny harambato dia misy tabataba mahatsikaiky midina.
Ny coyote, marika amerikanina zanatany
Ny tatoazy Coyote dia tsy entanin'ilay olon-dratsy manintona avy amin'ny sariitatra Warner fotsiny, fa koa biby tena miavaka miaraka amin'ny sasany fifandraisana mahery vaika amin'ny Amerikanina tera-tany. Heverin'izy ireo ho toy ny fanahy mamorona sy vazivazy izy, raha ny marina dia nananihany ka namitaka ny tenany mihitsy aza indraindray.
Mitovy amin'ny amboadia, fa amin'ny kinova kely kokoa, ny coyote koa dia heverina ho biby tsy dia manintona loatra, na dia manana fanomezana majia mahery aza.
Ny tatoazy Coyote dia aingam-panahy avy amin'ny biby liana iray sa tsy izany? Lazao aminay, manana tatoazy iray entanin'ity biby ity ve ianao? Nandeha tamin'ny sariitatra ve ianao sa ilay tena izy? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tattoosin'ny toetra amam-panahy » Tattoos of coyote, ny fahavalon'ny roadrunner ary biby tena manokana
Tattoo beagle, biby fiompy tokana